ဖူဂျီ အသံလွှင့်ဌာန(FUJI Television)ရဲ. အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ. ” စိတ်နှလုံးဘ၀င်အကြိုက်တွေ.စေမယ်. တီလီဗေးရှင်း” ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ.ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အခုပိုပြီးရေပန်းစားလာနေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို မိတ်ဆက်လိုပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်မှာ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို ထုတ်လွှင့်ပြီး အခုပြောမယ့် အကြောင်းအရာရဲ. ခေါင်းစဉ်ကတော့ ”ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောသိပံ္ပပညာရှင် ဖွားဖွား ခုဘိုတာ ခါ.ယော့ကို (KUBOTA Kayoko) ” ပါ။
အစီအစဉ်ကို ၂၀၀၉ခုနှစ်၎လပိုင်း ၁၉ရက်နေ.မှာစတင်ထုတ်လွှင့်ပြီး ဖူဂျီအသံလွှင့်ဌာနမှလည်း နောက်ဆက်တွဲကို ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပြီး ၊ အခြားအသံလွှင့်ဌာနများကလည်း ဖွားဖွားနဲ.တွေ.ဆုံခန်းတွေ ဖွားဖွားရဲ့အကြောင်းတွေကို ထုပ်လွှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီ့နောက်တော့ အပြင်လောကမှာဒီအကြောင်းဟာ တစတစ လူပြောများလာခဲ့ပါတော့တယ်။
အဓိကပြောပြချင်တာကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ. ဦးနှောက်ဟာ အသက်၃နှစ်အရွယ်အထိမှာ တဟုန်ထိုး တိုးတက်မှု ရှိတာကို သတိပြုကြည်.ပြီး၊ သူ.ရဲ.စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဥာဏ်ရည်ကို ပျိုးထောင်ပေးနိုင်တာ (ပင်မဦးနှောက်ကြီးရဲ. အရှေ.ပိုင်းခြမ်းကို လှုန်.ဆော်မှုပေးတာ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသိဥာဏ်ပညာကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းတစ်ခုအနေနဲ. လူမမယ်ခလေးအရွယ်များပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းအနေနဲ. အသိအမှတ်ပြုထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် တစ်နှစ်အောက်အရွယ်ခလေးငယ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်နည်း (၇)ချက်ကို အစီအစဉ်ကနေ မိတ်ဆက်ပညာပေးသွားပါတယ်။
(၁) သေးစိုအနှီး(ဘောင်းဘီ)ကိုလဲပေးချိန်မှာ ခလေးကို အသံပြုရမယ်။ (အကြားအားရုံမှတဆင့် စကားပြောခြင်းကို အာရုံခံစားတတ်စေရန်)
(၂)တူတူရေ၀ါး ကို တနေ. အနည်းဆုံး ၅ကြိမ်ထက်မနည်းကစားပေးရမယ်။( ခလေးငယ်အား မမြင်ရခြင်းမှ မြင်ရခြင်း အချိန်အကြား စောင့်ဆိုင်းမျှော်လင့်မှုကို အာရုံခံစားတတ်စေရန် နှင့် အမြင်အားကို စူးစိုက်တတ်စေရန်)
(၃)ခလေးငယ်ကို အရောင်အသွေးစုံတဲ့ အ၀တ်အစားဆင်ယင်ပေးရမယ်။ (အရောင်ခွဲခြားမှတ်သားမှု နှင့် အဆင်အသွေး တို.ပေါ်အာရုံခံစားတတ်စေရန်)
(၄)တတ်နိုင်သ၍ကျောပိုးချီပေးရမယ်။( ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သော အာရုံနှင့် ဟန်ချက်ယူခြင်းကို စတင် ခံစားတတ်စေရန်)
(၅)ခလေးငယ်ပြောပြောစကားကို မသုံးရ။ စကားမပီကလာပြောခြင်းမပြုရ။(မပီကလာပြောဆိုခြင်းသည် ခလေး၏ ပြောဆိုမှုအရည်အသွေးကို ရုတ်လျော့စေသည်)
(၆)တူ၊စာရေးကရိယာဘောပင်များကို သူ.အလိုအလျေက်ရုတ်တရက်ဆွဲကိုင်စေခြင်းမပြုရ။ (ထိုအရာများတွင် ကိုင်ပုံကိုင်နည်းစံနစ်တကျရှိသောကြောင့် လူကြီးများမည်သို.မည်ပုံ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲ သည်ကို အကြိမ်ကြိမ်ကြည့်ရှုစေခြင်းဖြင့် မှတ်မိစေရမည်။ )
(၇) ဘယ်ဟာယူမလဲ။ ဘယ်ဟာပိုကြိုက်လဲဆိုတဲ. မေးခွန်းကို မေးပေးရမည်။(နှိုင်းယှဉ်မှု၊ ရွေးချယ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတို. ကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း)
အဲဒါတွေအပြင် ခလေးငယ်ကို အနံ.တွေကိုကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ အားလုံးကို သိအောင်လုပ်ပေးရမယ်။ ”ရပ်လိုက်၊မလုပ်ရဘူး”ဆိုတာတွေကို ပြောတဲ.အခါ ခလေးရဲ. လှုပ်ရှားမှုကို ဘယ်လိုရပ်ရမယ်ဆိုတာသိလာအောင်၊ ဂျောက်ဂျက်တို. လှုပ်ခါတဲ.အရာတွေကို ခလေးရဲ.အရှေ.မှာ လှုပ်ပြရင် ဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ဘို.လိုပါတယ်တဲ.။ ခလေးငယ်လေးရဲ. အမြင်အားဟာ မြန်တဲ. လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူမျက်စိနဲ. ချက်ချင်းမမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ.။
”မကြိုက်ဘူး၊ မုန်းတယ်”ဆိုတဲ. စကားကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ ခလေးရဲ.ကိုယ်စားပြောပေးတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ လက်ချောင်းတွေကို တစ်ချောင်းစီ လှုပ်ရှားပေးရပါမယ်။ ပိုက်နဲ.စုတ်သောက်တတ်အောင်သင်ပေးရပါမယ်။ နို.ဗူးသောက်ခြင်းဟာ ခလေးရဲ.လျှာဖွံ.ဖြိုးမှုအတွက် အကျိုးသိပ်မရှိပါဘူး။ ခလေးကို စကားပြောတဲ. အခါ မြန်မြန်ပြောပေးရပါမယ်။
” ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောသိပံ္ပပညာရှင် ဖွားဖွား” ကပြောပါတယ် ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်မွေးမလဲ မွေးချင်သလောက်မွေး၊ အားလုံးကို ဥာဏ်ကောင်းတဲ.ခလေးဖြစ်အောင်လုပ်လို.ရတယ်၊ ကိုယ်.ခလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်တာလွယ်လွယ်နဲ.သူ.သဘောအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ထိပ်တန်းအောင်မြင်သူ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ. ။
မိခင်ဖခင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်က သိပ်မပင်ပန်းတဲ. ဂရုစိုက်ပြုစုမှု ကြောင့် ခလေးတစ်ယောက်ဟာ အထင်ကရ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တာကို သိပံ္ပပညာနဲ.လက်တွေ.ကျကျ သဘောပေါက်လိုက်ရပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောသိပံ္ပပညာရှင် ဖွားဖွားဟာ၊ငယ်ရွယ်စဉ် ချမ်းးသာသောမိဘများမှပေါက်ဖွားခဲ.ပြီး၊ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါမောက္ခခင်ပွန်းသည် နှင့်အတူ နေထိုင်ပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း သားနှစ်ယောက်တို.ကို မွေးဖွားခဲ.တဲ. အာဂအမျိုးသမီး၊စံပြမိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ လိပ်စာမှာ အဲဒီအစီအစဉ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်လိုဖြစ်နေတယ်နော်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Thursday, August 13, 2009